Maxaa Fashiliyey Mooshinkii Ay Wateen Xildhibaannada Muxaafidka? – somalilandtoday.com
Maxaa Fashiliyey Mooshinkii Ay Wateen Xildhibaannada Muxaafidka?
(SLT-Hargeysa)-Mudaneyaasha Muxaafidka ah ee Golaha Wakiillada, ayaa ku guul dareystay inuu meel mar noqdo mooshin ay horkeen Golaha Wakiillada, kaasoo xambaarsanaa nuxur la mid ah mid kale oo ay wateen Xildhibaannada Mucaaradka ee Golahaasi.
Labadan Mooshin oo ujeeddadooud ahayd derejo beddelka Degmooyinka dalka qaarkood, ayaa waxa jabay oo kii ay Muxaafidku wayeen oo sharci yaqaannada Goluhu sheegeen in aanu waafaqsanayn sharci, madaama oo uu ka hadlayey mabaa’id guud oo aanay ku xusin Mooshin qodob gaar ah oo wax laga beddelayo oo la xidhiidhay xeerka 23 ee ismaamulka degmooyinka iyo gobollada.
Mooshinkan fashilmay ee Xildhibaannada Muxaafidku wateen, ayaa la sheegay in ay ku doonayeen in wax lagaga beddelo degmooyin 20 gadhaya, kuwaas oo qaarkood yihiin derajada D.